MAQAAL: Cristiano Ronaldo Oo Durbaba Goostay Tikidhkii Uu Kaga Tagi Lahaa Madrid Ka Dib Hadalkiisii Shalayto. | Wararka Jubbaland
MAQAAL: Cristiano Ronaldo Oo Durbaba Goostay Tikidhkii Uu Kaga Tagi Lahaa Madrid Ka Dib Hadalkiisii Shalayto.
Feb 29, 2016 - jawaab
Hadaladii uu sheegay Cristiano Ronaldo ka dib ciyaartii shalayto ee Madrid derby waxa ay ka soo saartay muuqaal cusub: Inuu kaliya daneeyo guushiisa shaqsiga ah. Dabcan waa quraafaad in sidaasi lagu tilmaamo laakiin hadaladii uu ka yiri asxaabtiisa kooxda ma ahan kuwa difaacaya shaqsiyadiisa.
“Haddii ciyaaryahan walba uu igu heer ahaan lahaa, waxaan ku jiri laheyn kaalinta koowaad ee La Liga. Sannad kasta sida saxaafada ay aaminsan tahay waxaan u muuqdaa qashin, laakiin tirooyinka iyo istaatistikada been ma sheegto” ayuu yiri.
“Ma doonayo inaan cidna qiimotiro laakiin marka aysan joogin xiddigaha waa weyn waa ay adag tahay in la guuleysto. Waan jeclahay inaan la ciyaaro Pepe, Karim Benzema, Bale iyo Marcelo.
” Kalama jeedo in Jese, Lucas Vazquez, Kovacic aysan fiicneyn, aad ayay u fiican yihiin laakiin…”
Hadaba sidee hadalkaas uu u caawinayaa isku duubnida kooxda Real Madrid. Waxa uu jecel yahay istaatistikada shaqsiyadeed mana ahan wax xun laakiin waa inuu ogaado in kooxdaan loo dhisay inuu isaga ka dhex muuqdo.
Marka aad fursado qasaariso kulan guuldarro 1-0 ay kaa soo gaartay koox aad hal magaalo ku xafiiltantaan, lama joogo waqtigii aad qiimeyn ku sameyn laheyd ciyaartoyda kaa garab ciyaarta. Malahana taasi wuu gareystay ka dib saacado markii ay ka soo wareegtay hadalkiisa.
Wuxuu u waramay jariirada AS oo uu u sheegay inuusan kala jeedin inuu ka fiican yahay ciyaartoyda kale ee kooxdiisa kale balse uu kala jeeday hadalkiisa in kooxda ay diloodeen dhaawacyada ay ku maqan yihiin xiddigaha waa weyn. Kabtan Sergio Ramos ayaa isna difaacay Ronaldo isagoo yiri: “Uma maleynayo inuu sidaasi ku fekerayo.”
Hadaba yaanan la ilaawin in Ronaldo uu 31 sanno jir yahay, sidaasi darteed xagaagan waa fursadii ugu danbeysay ee ay Real ku heli laheyd qiimo qaali ah. Ka dib hadalkaan ay carada ka keentay waxaa laga yaabaa inuu ku ogaado inuusan aheyn ciyaaryahan aan la bedeli karin, waxaana saadaasha ay tahay in Ronaldo uu durbaba sii goostay tikidhkii uu kaga tagi lahaa Madrid.
Maxay kula tahay adiga? Fekerkaaga ku aadan hadalka Ronaldo iyo mustaqbalkiisa kooxda waxaad inoogu soo qortaa qeybta hoose ee aragtiyada..
Waxaa Qoray: Saed Balaleti